[Akhriso:-] Dhakhtarkii u dagaallamay in gacmaha la dhaqdo ee waallida lagu tilmaamay, sida xunna u dhintay
Tuesday 8th October 2019 17:39:18 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Dhakhtarkii u dagaallamay in gacmaha la dhaqdo ee waallida lagu tilmaamay, sida xunna u dhintay
Waxaa jiray wakhti in qofka xanuunsan loo qaado isbitaal aysan ahayn tallaabada ugu fiican ee lagu dagdago.
Qarnigii 19-aad, isbitaalladu waxay ahaayeen meelaha saldhigga u ah caabuqa iyo jeermiska, dadka kaliya ee loo qaadi jirayna waxay ahaayeen kuwa aadka u xanuunsan iyo kuwa sii dhimanaya.
Run ahaantii waxaaba ka fiicneyd in guryaha la isku daweeyo: xaddiga dhimashada ee Isbitaalladu wuxuu markaas 5 laab ka badnaa kan guryaha adeegyada caafimaad loogu sameeyo dadka.
Isbitaallada waxaa ka buuxi jiray qoyaanka kaadida, matagga iyo dhacaannada kale ee jirka bani'aadanka. Urka ayaa ahaa mid aan loo dulqaadan karin, waxaana mararka qaar ay shaqaalaha isbitaallada adeegsan jireen maryo ay sanka ku xirtaan.
Dhif ayey ahayd in dhakhaatiiru ay dhaqaan gacmahooda ama qalabka ay isticmaalaan, qolalka lagu sameeyo qalliinnadana waxay u wasakh badnaayeen isla sida ay u wasakh badnaayeen dhakhaatiirta qalliinnadaas sameynayay.
Arrintaas ayaa sababtay in isbitaallada lagu magacaabo "Guryaha Geerida".
Dunida noocaas ah, ee aan wali ka warhelin halista uu jeermiska leeyahay, ayuu nin isku dayay inuu seyniska u adeegsado joojinta fiditaanka caabuqa.
Magaciisu wuxuu ahaa Ignaz Semmelweis.
Dhakhtarkan u dhashay waddanka Hungary ayaa isku dayay inuu nidaamka gacmo dhaqashada ka hirgaliyo magaalada Vienna, 1840-meeyadii, si uu u yareeyo xaddiga dhimashada ee ka jiray isbitaallada lagu umulo.
Waxay ahayd arrin muhiim ah laakiin waa lagu guul darreystay, dhakhtarkii fikraddaas keenayna waxaa ku maadeystay dhakhaatiirtii kale ee ay isla shaqeynayeen.
Laakiin ugu dambeyntii waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa "Badbaadiyihii hooyooyinka".
Duni aan jeermis lahayn
Semmelweis wuxuu ka shaqeyn jiray isbitaalka guud ee magaalada Vienna, halkaasoo ay meydadka isku dulsaarnaan jireen qolalka isbitaalka, si lamid ah isbitaalladii kale ee xilligaas jiray.
Ka hor inta aan jeermiska la aqoonsanin qeybihii dambe ee qarnigii 19-aad, dhakhaatiirtu aqoon uma aysan lahan, kumana aysan baraarugsaneyn in nadaafad darrada ka jirtay isbitaallada gudahooda ay door weyn ka ciyaareysay dhimashada faraha badan.
"Aad bay annaga noogu adagtahay inaan qiyaasno duni aan laga fahansaneyn jiritaanka jeermiska ama bakteeriyada", sidaas waxaa BBC-da ku yiri Barron H. Lerner, oo ah khabiir cilmiga taariikhda caafimaadka ka dhiga jaamacadda New York.
Wuxuu intaas ku daray in bartamihii qarnigii 19-aad ay cudurradu u faafayeen sida ay daruuruhu ugu faafaan cirka.
Isku dheellitir la'aan xasuus mudan
Dadka khatarta ugu weyn ugu jiray nadaafad darrada cudurrada keenta awgeed waxaa ka mid ahaa hooyooyinka umulaya, gaar ahaan kuwa xubintooda taranka ay dhaawacanto marka ay dhalayaan. Dhaawacyada furan waxay ahayd meelaha ay hoyga ka dhigato bakteeriyada ay wateen dhakhaatiirta.
Wixii ugu horreeyay ee Semmelweis uu ku baraarugay wuxuu ahaa nadaafad darro aad u weyn oo ka jirtay labo isbitaal oo ku yaallay magaalada Vienna, kuwaasoo mid uu hablaha ka umilin jiray dhakhtar nin ah halka kan kalena ay ka howlgalayeen haween umulisooyin ah.
Mid ka mid ah labadaas isbitaal, oo ka yaabiyay ardayda caafimaadka, wuxuu lahaa 98.4 dhimasho oo ku timaada kunkii dhalmo.
Xaddiga isbitaalka kale ee ay haweenka umulisooyinka ah joogeen wuxuu ahaa 36.2 dhimasho oo ku timaadda kunkii dhalmo.
Guul aan abaalmarin lahayn
Hase ahaatee, Semmelweis wuxuu dhakhaatiirtii kale ka dhaadhicin waayay in jeermiska soo raaca gacmaha uu keeno cudurro ay ka mid tahay qandho xad dhaaf ah.
Wuxuu buug ka qoray arrintaas, isagoo dadaal dheer u galay sidii fikraddiisa waxtarka leh loo fahmi lahaa.
Ka dib markii dhowr jeer si khaldan loo arkay daabacaadda buuggiisa, Semmelweis wuxuu ku xanaaqay dadka dhaliilayay wuxuuna dhakhaatiirta aan gacmahooda dhaqin la simay "dadka dilalka qorsheysan fuliya".
Markii qandaraaskii shaqo ee uu ku joogay isbitaalka guud ee Vienna loo cusbooneysiin waayay, Semmelweis wuxuu dib ugu laabtay waddankiisa Hungary, wuxuuna shaqo aan mushaar lagu siineynin ka billaabay isbitaal lagu magacaabi jiray Szent Rókus, oo ku yaallay magaalada Budapest.
Laakiin dhaleeceyntii loo jeediyay fikradda uu la yimid halkaas kuma joogsanin, caradii uu Semmelweis ka qaaday dhakhaatiirtii dhaqan galin weysay nidaamkiisa gacmo dhaqashadana wuu sii weynaaday.
Markii la gaaray sanadkii 1861-kii, dhaqankiisu wuxuu noqday mid qallafsan, afar sano kadibna Semmelweis waxaa loo kaxeeyay xarun lagu xannaaneeyo dadka dhimirka la'.
Nin ay isla shaqeyn jireen ayaa ku siray inay isla soo booqdaan xarun caafimaad oo laga furay magaalada Vienna.
Balse markii uu Semmelweis ogaaday arrinta, uuna isku dayay inuu ka baxsado isbitaalka waallida ee la geeyay waxaa si xun u garaacay nin waardiye ah, ka dibna waxaa lagu tuuray xabsi.
Labo isbuuc ka dib, Semmelweis wuxuu u geeriyooday caabuq ka dhashay dhaawac ka gaaray gacantiisa midig. Markii uu dhimanayay wuxuu ahaa 47 jir.
Uma suurtagalin inuu qeyb ka noqdo isbaddalkii markii dambe la sameeyay ee ay ku lug lahaayeen dhakhaatiirta, sida Louis Pasteur, Joseph Lister iyo Robert Koch.
Hase yeeshee, Semmelweis markii dambe waa loo aqoonsaday dadaalkiisii qiimaha badnaa: Haddana in gacmaha la dhaqdo waxay ka mid tahay hababka ugu waaweyn ee looga hor tago caabuga ku faafa isbitaallada gudahooda.
Qofkii Ugu Horreeyay Oo U Dhintay Coronavirus Oo Yurub Laga Xaqiijiyay
Nin Soomaali Ah Oo Doonayay Inuu Baasaboor Gabadh Ku Dhoofo Oo Lagu Qabtay Dalka Turkey [Gudaha Ka Akhriso]
[Akhriso:-] Sacuudiga Oo Turkiga Ku Eedeeyey Inuu Taageero Kooxaha Xagjirka Ah Ee Soomaaliya Iyo Libya Ka Dagaalama.
[Daawo:-] Waraysi Kulul Oo Lala Yeeshay Madaxweyne Farmaajo & Su'aalo Lagu Karbaashay Oo Uu Ku Haftay [ Somalil
Xisbiga Mucaaradka Ah Ee UCID Oo Ku Tilmaamay Hadalkii Farmaajo Mid Wakhtigiisii Dhacay [ Muuqaal ]
[Akhriso:-] Xukumadda Farmaajo Oo Lu Eedeeysay Inay Hanjabaad Iyo Cago juglyan Ku Hayso Xorriyadda Warbaahinta.